Ny voka-dratsin'ny fahasalamana
Mitaky fahafoizan-tena ny hatsarana Saingy ny zava-mitranga dia tena lehibe loatra ireo niharam-boina ireo fa ny fijerin'ny mpitsabo ao amin'ny toeram-pitsaboana momba ny toetrandro dia tokony ho tsikaritrao fa tsy hankasitraka ny fomba fijerin'ny ankizilahy. Tsy ny cream rehetra ihany no mahasoa. Ny makiazy sasany dia mety ahitana ny zavatra mampidi-doza mampidi-doza ao amin'ny firafitr'izy ireo izay aorian'ny dokotera, ny dokotera dia afaka tena mila fanampiana. Aiza no niseho ny fananganana ireo zavatra mampidi-doza ary nahoana isika no tsy afaka manao izany raha tsy misy azy ireo?
Mampalahelo fa ny voka-dratsiny no mampiakatra ny endriny izay manome "vokatra azo tsena" ny vokatra matetika. Andeha hojerentsika ny vidiny izay ahafahantsika manana endrika tsara tarehy avy amin'ny vokatra kosmetika:
Toe-javatra mahaliana. Ireo tompon'ny hodi-hoditra maina dia mividy menaka misy teboka matavy, satria mamelona tsara ny hoditry ny tarehiny. Ny fototry ireo vokatra avy amin'ny kosmetika ireo dia olitra mineraly na ara-teknika, ny fampiasana izany dia mitarika ho amin'ny fery maloto sy ny aretina amin'ny hoditra.
Ny fahasamihafana amin'ny crème. Izany dia tanterahana amin'ny fampiasana emulsifiers. Ny votoatiny tafahoatra ao amin'ny cosmetics dia mitarika ho amin'ny tsy fahampian'ny hoditra, ny fahamamoana ary ny fahamendrehana.
Ny fiainana ety lava no omen'ny conservation , ampiasaina hanitarana ny fiainan'ny mpanenona. Ny olana dia amin'ny alalan'ny fanesorana ny flora bakteria, ny fiarovana ihany koa dia misy fiantraikany ratsy amin'ny sela olombelona. Matetika, parabens dia ampiasaina amin'ny kojakojamaso ho an'ireny tanjona ireny.
Pleasant smell. Sakafo ho solon'ny solika ilaina. Ireo zavatra mampidi-doza ireo no mahatonga ny dindony matanjaka indrindra.
Manantena izahay fa hatramin'izao dia hijery akaiky ny labels amin'ireo novolavolaina kosmetika, na koa tsaratsara kokoa - miezaha hampiasa menaka manitra voajanahary.
Inona avy ireo aloky ny masony manga?
Ny menaka antiseptika
Clay ho an'ny tarehy amin'ny karazana hoditra
Ny hoditry ny tarehy - fitsaboana
Cosmetics amin'ny kilasy lux
Sakafo hariva ho an'ny maso mena
Tsiranoka ho an'ny dermatitis
Ny crème face no safidy tsara indrindra ho an'ny karazana hoditra rehetra
Mihoatra noho ny mascara lavalava?
Sahia matevina amin'ny hoditra hoditra
Ahoana ny fampiharana ny vovony?
Polysorb avy amin'ny akne
Karazam-bary mitaingina vehivavy
Sary "mivadika" - inona no tokony harahina?
Siketra ho an'ny sigara
Ny lalana famoronana an'i Tina Turner dia hametraka ny fototry ny mozika "Tina: The Musical"
Fifandirana amin'ny fianakaviana
Notehirizin'i Apple - ny tantaran'ny fialantsasatra
Mametraka lamosina vinyl amin'ny tananao manokana
Fitsaboana amin'ny henam-pako ao anaty lafaoro
Fiompiana trondro amin'ny zaza madinika
Fitaovana avy amin'ny takelaka misy
Manao ahoana marina ny manao fanafihana amin'ny akanjoko?
Nahoana ny moka no manana olona hafa?
Ny dysplasia am-behivavy amin'ny sehatrasa fahatelo
Kilasin'ny laminasa tsara kokoa?
25 sary momba ny saka tsy afaka miaina raha tsy misy lanezy
Rihanna, George Clooney sy ireo olo-malaza hafa dia nilaza momba ny firaisana tsy mahazatra